प्रतिरक्षा प्रणाली नै निर्विकल्प | चितवन पोष्ट
विश्वलाई कोरोनाले खर्लप्पै निलेको छ अहिले । सुरूका दिनमा जुन जुन देशमा यसले बेस्सरी प्रभाव पारेको थियो ती देशमा शान्त हुँदै गएको छ, तर सावधान नहुने देशमा अझ दोहो¥याई तेह¥याई फर्केर आइरहेछ झन्झन् । इटाली, फ्रान्स, बेलायतजस्ता देशहरुमा अहिले शिथिल हुँदै गएको छ । अमेरिकामा पहिले जुन तीव्र गतिमा कोरोनाको संक्रमण बढेको थियो, अहिले बिस्तारै संक्रमण घट्तै गएको उसको निष्कर्ष छ । उसले भनेको छ, अहिले ६ प्रतिशतले घटेको छ संक्रमण दर । तर यति भन्दाभन्दै पनि अमेरिकामा संक्रमणकै कारण झन्डै त्यहाँ एक लाख साठी हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै स्थिति छ ब्राजिलको पनि ।
छिमेकी देश भारतमा लकडाउन अवधिभित्र निकै सुस्त गतिमा रहेको संक्रमण दर लकडाउन खुलेपछि एक्कासि ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । एकैदिन त्यहाँ पचास हजारको संख्यामा संक्रमित थपिइरहेको स्वास्थ्य विभागबाट प्रकाशित जानकारीमा जनाइएको छ । हाम्रो देशसँग सीमा जोडिएको बिहार राज्यको संक्रमण ग्राफ उच्चस्तरमा पुगेपछि त्यहाँ सरकारले लकडाउन गरेको देखिन्छ ।
हाम्रा मुलुकबाट जति युवा भारतीय बजारमा श्रम बेच्न जान्छन् झन्डै दोब्बर संख्यामा त्यहाँबाट नेपाली ग्रामीण बजारदेखि ठूला सहरहरुमा श्रम बेच्न भारतीय नागरिक नेपाल आउँछन् । नेपालबाट श्रम बेच्न जाने युवाहरु बौद्धिक र शिल्पयुक्त श्रमभन्दा बलयुक्त श्रम बेच्नेहरुको भारी संख्या रहेको देखिन्छ । उताबाट हामीकहाँ आउने भारतीय नागरिकहरु प्रायः सीप जानेका दक्ष फेला पर्दछन् । सिमेन्टको काम गर्नेहरुमा सहयोगीभन्दा ज्यादा मुख्य मिस्त्री नै हुने गर्छन् । भ्mयालढोका बनाउनेदेखि फर्निचर बनाउनेहरुमध्ये मुख्य र हेल्पर मिस्त्री पनि प्रायः उतैका भेटिन्छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै स्थिति छ यहाँ । सडक विभागमा काम गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारहरुमा काम गर्ने, नेट सर्भिस, टेलिकमहरुमा समेत काम गर्ने कामदार हेर्ने हो भने पनि तिनकै बाहुल्य छ त्यहाँ । विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरुमा काम गर्ने ज्यामीदेखि कपडा सिलाउने मिस्त्री, होटल, फलपूmल, तरकारी पसल व्यवसायी, कपडा, किराना आदि इत्यादिका व्यवसायीहरु समेत अझै पनि भारतीय नै छन् ।
यसर्थ, नेपालको व्यवसायदेखि विकास निर्माणहरुमा समेत भारतीय श्रमिकहरुको चाप उल्लेख्य रहेको स्वीकार्न करै लाग्छ । किन पनि भने काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रमा विद्युतीय प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गर्ने कार्य किन सुस्त भइरहेको भनेर गरिएको प्रश्नमा विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कामदार घर गएकाले काम हुन नसकिरहेको र उनीहरु फर्किएपछि कामले तीव्रता लिने भन्ने जवाफभित्र पनि भारतीय श्रमिकहरुले नेपालको श्रमबजारमा ओगटेको स्थान सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को एउटा सन्दर्भ सँगै जोडौँ । भर्खरै पूर्वी पहाडी सहरमा भारतीय श्रमिकमा संक्रमित रहेको घटना बाहिर आयो । लकडाउन हटेको भन्दै त्यहाँसम्म सेवा दिन पुगेका थिए ।
भारतीय दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष (बलमा मात्र निर्भर) कामदारले गर्ने व्यापार व्यवसाय र दिइरहेको सेवाबापत नेपालबाट लैजाने रेमिट्यान्स नेपाली भारतीय श्रमबजारबाट भित्र्याउने रेमिट्यान्सभन्दा कैयौँ गुणा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सोही अध्ययनले भारतीयहरुले विभिन्न मुलुकबाट भित्र्याउने रकममध्ये नेपालबाट लैजाने रेमिट्यान्समा छैटौँ स्थानमा रहेको देखाएको छ ।
यस तथ्यले नेपाल कोराना संक्रमणबाट सहजै बच्न सक्ने देखिन्न । धेरैजसो चाहे ती उद्योगपति हुन् चाहे ती घरेलु उद्योग, ठेकेदार व्यवसायी आदि इत्यादि नै किन नहून्, जसले भारतीय कामदारलाई कज्याएर वस्तु उत्पादन गरिरहेछन् वा सेवा सुचारू गरिरहेछन् तिनले नै रातारात आप्mना कामदारहरु बोलाइरहेछन् । त्यत्ति ठूलो संख्यामा भारतीय श्रमिकहरु भित्रिरहेछन् नेपालको गाउँसहर, बस्ती र आँगनहरुमा भने हामी संक्रमणबाट अछूतो कसरी रहन सकौँला र ?
जहाँ संक्रमणको दर उच्च रहेको र लक्षणसमेत नदेखिने गरेको परिस्थितिमा त्यस्ता क्षेत्रका नागरिकलाई काममा बोलाउँदा कतिपयले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका पनि होलान्, तर अधिकांशले पूरा गरेको देखिएको छैन । कैयौँ स्थानमा घोषित नाका छन्, जहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको उपस्थिति छ । त्यहाँ त नेपाल छिर्न पाएनौँ भनेर लड्न सुरिएर आउँछन् भारतीयहरु । जसका कारण सुरक्षाकर्मीसँगको भिडन्तमा एक भारतीय नागरिकको ज्यान गएको थियो । कतिपय नाकाहरुमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जीउज्यान अर्पिएर देशको सीमा सुरक्षादेखि आवागमनमा समेत कडाइ गरिरहेछन् । कतिपयले नदेखेझैँ गरिरहेको त्यहाँका बासिन्दाको ठम्याइ छ ।
त्यसो त, त्यस्ता कैयौँ आवागमनका स्थानहरु छन् जहाँ न गस्ती दिएर साध्य छ, न गस्ती गर्न नै सकिने स्थिति छ । त्यस्ता ठाउँहरुबाट जोखिम मोलेरै भए पनि मानिसहरु आवागमन गरिरहेछन् । अवैध सामान ओसारपसार गर्नेदेखि कोरोना संक्रमणको आदानप्रदान गरिरहेछन् । यस्तो खुला सीमा नै दुवै देशका निम्ति उत्पादकभन्दा प्रत्युत्पादक बन्ने गरेको छ प्रायः ।
हो, भारततिर कोरोना नहुने र बोर्डरसम्मकै नेपालीलाई हुने स्थिति रहेको भए उताका सुरक्षाबल र नागरिकहरुले आवागमन ठप्पै पनि पार्न सक्दा हुन्, तर नेपालको सुरक्षा अंग र नेपाली नागरिकले सकेसम्म प्रयत्न गरे पनि यो सम्भव देखिरहेको छैन ।
यसैले नेपाली उद्योग, व्यापार व्यवसाय, विकास निर्माण आदि इत्यादिलाई सुचारू तुल्याउन भारतीय जनशक्ति अपेक्षित ठानिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा कोरोना बढ्नुलाई कसरी अस्वाभाविक मान्ने ? नेपालका सीमान्तीय क्षेत्रमा नै अहिले संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या हेर्दा पनि सीमान्तीय नेपालीहरु नै ज्यादा छन् । बारा, सप्तरी, मोरङ, बाँके आदि जिल्लाहरुमा जुन संक्रमणको तीव्रता छ त्यो सीमापारिसँग रहेको विभिन्न खाले सम्बन्ध, किनमेल, बसाउठी आदि इत्यादिजन्य रहेको लाग्दछ । त्यही स्थिति संघीय राजधानीमा पनि देखिनुका पछि पनि यस्तै त¤वले अहम् भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
काठमाडौँमा भित्रिने नाकाहरुमा स्वाब संकलन गरी पिसिआर परीक्षण गर्दा प्राप्त भएको नतिजा हेर्दा पनि अन्य भित्री तराईका जिल्लाहरुबाट राजधानी भित्रिनेहरुभन्दा सीमान्तीय तराईका जिल्लाहरुबाट भित्रिनेहरु ज्यादा रहेको देखिन्छ । यसैले, संघीय सरकारले विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ । उसले आगामी रणनीति बनाउला ।
तर, सत्यचाहिँ यो रहेछ कि कोरोना कुनै मौसमी प्रभावबाट अन्त्य हुने प्रजातिको भाइरस रहेनछ । यससँग लड्दै र भिड्दै जीवनलाई सुचारू तुल्याउनुको विकल्प हामीसँग अब बाँकी छैन रहेछ । कतै न कतै र कसै न कसैबाट अन्जानमै यो डढेलोझैँ सल्कन पनि सक्छ । सचेत र सावधान हुँदै निर्दिष्ट स्वास्थ्यका नियमहरु परिपालना गर्दै हामीले शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित गर्नु र त्यसैमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्नुमा नै बुद्धिमत्ता देखिन्छ । सँगसँगै मानसिक स्वस्थता र उच्च मनोबल बनाइराख्न आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नुचाहिँ अपरिहार्य बन्दै गएको छ । जसले कोरोनाजस्ता भविष्यमा आउने झन् खतरनाक विषाणुहरुबाट समेत हामीलाई सुरक्षित राख्न सकोस् । त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ अब ।
यसको अचुक उपाय भनेकै हाम्रो अहिलेको आहारविहारको शैलीमा परिवर्तन नै हो । हामी न पूर्वीय आर्ष निर्देशित खाद्य संस्कृतिअनुकूल छौँ, न त पूर्णरुपमा पच्छिमा खाद्य संस्कृति अँगाल्न सकिरहेछौँ । अब हामी पच्छिमा शैलीको खाद्य संस्कृति अँगाल्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ र त्यसले हाम्रो जीवन सुरक्षितभन्दा असुरक्षित नै तुल्याउने देखिन्छ । यसर्थ, हामीले हाम्रो पुरानो खाद्य संस्कृति जुन स्वस्थकर थियो त्यतै फर्किन सक्यौँ भने हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार हुन सक्तछ । त्यस्तै, शारीरिक श्रम गर्नेका लागि आसन आवश्यक नपर्न सक्छ, तर ध्यान र अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभातीजस्ता मानसिक योग गर्नु सबैलाई अपरिहार्य छ । नित्य स्नान, पहिरन, आचरण, अभिवादन आदि इत्यादिमा समेत पूर्वीय दर्शनले निर्देश गरेअनुरुप गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यसो गर्नाले हामीमात्रै होइन सिंगो मानव सुरक्षित रहन सक्छ । यो सत्य बुझेका पच्छिमाहरुले समेत योग, आहारविहार र जीवन पद्धतिमा समेत यताको अनुसरण गरिरहेको स्थितिमा हामीले पनि आप्mनो संस्कार र संस्कृतिमा विश्वास गर्नुपर्छ । तिनमा गौरव गर्नुपर्छ र आचरणमा सुधार गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनमा भरपूर मद्दत गर्दछ र मात्र हामी बाँच्न र अरुलाई पनि बचाउन सक्छौँ ।
बझाङ । बझाङ प्रहरीले सम्झना कामीका हत्या आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको छ । सम्झनाको हत्या आरोपमा प्रहरीले २० वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई...